Oduu Aboolii - Addis Maleda
Category: Oduu Aboolii
Naannoo Sidaamaatti Jiraattotni magaalaa Hawaasaa Ganda Caffee keessa jiraatan 300 misoomaaf jedhamee lafti isaanii erga irraa fudhatamee waggaa sadii lakkoofsisus beenyaan kan hin kanfalamnerf ta’uu Addis Maaledaatti himaniiru. Jiraattotni naannawichaa Addis Maaledaatti akka himanitti,Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa Ganda Caffeetti namoota…
Dhaabbataan deeggaramuu Fi itti fufiinsa Hariiroo Eertiraafi Itoophiyaa irratti mana maree bakka bu’oota uummataatti koree dhaabbii dhimma Hariiroo alaa fi naneenyaaFi miseensota mana marichaa irraa gaaffiin irratti dhihaate. Ministeerri dhimma alaa gabaasa raawwii hojii ji’oota sagalii bara 2014,Caamsaa 9 bara…
Naannoo saboota,Sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Koonsoo fi naannawa ollaatti ji’a tokkotti qofa namootni 26 ol hidhatootaan Eenyummaan isaanii hin beekamnee ajjeeffamuu qondaalli naannawa sanaa maqaan isaanii akka eeramne barbaadan tokko Addis Maaledaatti himaniiru. Naannoo saboota,Sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina…
Daldaltootnisimintoo chirichaaroo guutummaa guutuutti sirnicha keessaa akka bahangochuun naannichatti Waldaaleen hojii gamtaa isaan bakka bu’uun akka hojjetan gochuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksiseera. Itoophiyaatti yeroo ammaa kana oomishni simintoo gahaan gabaarra jiraachuu dhabuuIsaa waliin Wal qabatee,gabaa…
Gatiin boba’aa dabalamuu isaatiin konkolaachistoonni fedha isaaniitiin gatii geejjibaa walakkaa ol dabalaniiru
Gatii boba’aa tibba kana dabalame hordofuudhaan imala magaalaa Finfinneetii gara Itoophiyaa kaabaatti taasifamu irratti konkolaachistoonni fedha ofii isaaniitiin gatii geejjibaa dabaluu isaanii Addis Maaledaan hubatteetti. Dabalati taasifame mootummaadhaan utuu hintaane konkolaachistoonni ofii isaaniitiin kan taasisan yoo ta’u; tajaajilamtoota geejjibaa hunda…
Bulchiinsa Masaraa Mootummaa Dbalatee Manneen hojii Meeshaalee Dhorkamuu qaban hindhorkine Bajanni isaanii ni Hir’ifama Jedhame
Manneen hojii federaalaa meeshaalee dhorkuu qaban ji’a tokko keessatti yoo hindhorkine tarkaanfiin hanga bajata hir’isuutti gahu karaa ministeera maallaqaatiin fudhatamuu akka danda’u abbaan taayitaa bittaa fi qabeenyaa mootummaa beeksiseera. Manneen hojii abbaa bajata federaalaa bara bajataa kana ji’oota saglan darbanitti…
Gatiin qullubbii magaalota Finfinnee fi naannoleetti dabalata gatii olaanaa agarsiisaa jira.
Torban keessatti kiiloon tokko birrii ol dabaleera. Magaalota Finfinnee fi naannoleetti gatiin qullubbii diimaa turban tokko keessatti dabalata olaanaa agarsiisuu isaa bitattoonni Addis Maaledaatti ibsaniiru. Gatiin asbeezaa yeroo yeroon dabalaa jiraachuutu mul’ata kan jedhan bitattoonni Addis Maaledaan dubbiste; keessumattuu qullubbii…
Awutobuusonni Shaggar 80 ol dhabiinsa meeshaalee jijjiirraatiin bobba’aa akka hinjirre ibsameera.
Awutobuusonni 80 ol dhabiinsa meeshaalee jijjiirraatiin bobba’aa akka hinjirre dhaabbanni tajaajila geejjibaa Shaggar Addis Maaledaatti beeksise. Hoogganaan sab-quunnamtii dhaabbata tajaajila geejjibaa Shaggar Saamu’eel Fissahaa Addis Maaledaatti akka ibsanitti; dhaabbatichi awutobuusota idilee 226 fi awutobuusota deeggarsa kennan 235, waliigalaan awutobuusota 461…
Manneen hojii federalaa torba sirna bittaa eleektirooniiksiin hojii irra oolchuun isaanii ibsame
Manneen hojii federaalaa torba sirna bittaa eleektirooniiksiidhaan hojii irra oolchuu isaanii abbaan taayitaa bittaa fi qabeenyaa mootummaa beeksise. Hoogganaan sab-quunnamtii abbaa taayitaa bittaa fi qabeenyaa mootummaa Sexxeny Galaan Addis Maaledaatti akka ibsanitti; sirna bittaa adda addaa ammayyeessuuf yeroo ammaa sirna…
Ji’oota sagalitti gogaa fi bu’aawwan gogaa irraa galiin doolaarri miliyoona 52.5 argameera
Bara bajataa kana ji’oota sagal darbanitti gogaa’ fi bu’aawwan gogaa irraa galiin doolaarri miliyoona 52.5 argamuu giddugalli qorannoo fi misooma induustirii gogaa fi bu’aawwan gogaa Addis Maaledaatti beeksise. Adoolessa 1 bara 2013 hanga Bitootessa 30 bara 2014tti ji’oota sagal jiranitti…
Bosonni paarkii biyyaalessaa gaarawwan kaabaa hektaarri digdamni mancaafamuun ibsame
Godina Gondar kaabaatti kan argamu paarkiin biyyaalessaa gaarreewwan kaabaa bosonni isaa hektaarri digdamni manca’uu hoogganaan paarkichaa Addis Maaledaatti beeksisan. Hoogganaan paarkichaa Ababaaw Azaanaawu; yaaddoowwan gurguddaan paarkichaa dheedicha gadhiisii olaanaa, gara paarkichaatti dhiyaachuudhaan ijaarsa seeraan alaa fi qonnaan seeraan alaa babal’achuu…
Waajjirri qindeessaa hidha haaromsaa guddichaa hanqina bajataa hammaataa akka qabu beeksise
Aajjirri qindeessaa hidha haaromsaa guddichaa hanqina bajataa hammaataa akka qabu Addis Maaledaatti ibse. Daarikteerri daayirektoreetii sab-quunnamtii fi koomunikeeshiinii waajjirichaa Hayiluu Abrahaam; waajjirichi humna namaa xiqqaadhaan hojiiwwan baay’ee akka hojjetu ibsanii; amma garuu hanqina bajataa jiruun hojiiwwan hedduu hojjechuun rakkisaa ta’uu…
Aanaa Limmuutti lafti qonnaa yeroodhaan qotamuu hafuun rakkoo hammaataa akka fidu ibsameera
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaatti aanaan Limmuu qaaxxee ABO Shaneen aggaamuun jiraattonni buqqa’uu isaanii hordofee; lafti qonnaa aanicha keessa jiru yeroon itti qotamu darbuun isaa haala amma keessa jiran caalaatti rakkoo hammaataa itti fiduu akka danda’u yaaddoo qabaachuu isaanii jiraattonni…
Maallaqni manneen murtii wabiif qaban garri caalu hindeebifamu jedhame
Too’annaa seeraa jala ta’anii qorannaan poolisii kan itti taasifamu ykn abbaa alangaatiin himati itti banamee namoonni wabiidhaan gadhiifaman; dhimmi isaanii utuu murteen itti hinkennamin fannifamee waan hafuuf maallaqni wabiif qabsiisan akka hindeebineef komachuu isaanii Addis Maaledaatti ibsan. Kanaanis manneen murtii…
Fageenya qarqara qaamolee bishaanii murteessuuf wixineen labsii qophaa’aa jiraachuun ibsame
Fageenya qaamolee bishaanii fi lafa gogaa gidduu jiru murteessuuf; akkasumas daangaa fageenya murtaa’e gidduu jiru kabachiisuuf; nageenya qaamolee bishaanii eegsisuuf; qarqara qaamolee bishaanii (buffer zone) misoomsuu fi kunuunsuuf wixineen labsii dandeessisu qophaa’aa jiraachuu ministeerri bishaanii fi inarjii Addis Maaledaatti ibseera….
Takinooloojiin bishaan bokkaa ijoo manaa irraa fayyadamuu dandeessisu hojii irra ooluuf jedhame
Bishaan bokkaa ijoo manaa irraa walitti qabuun lafa keessatti kuusuun tajaajiloota adda addaatiif takinooloojiin dandeessisu hojii irra ooluuf akka ta’e instiitiyuutiin takinooloojii bishaanii Itoophiyaa Addis Maaledaatti ibse. Takinooloojichi (Roof rain water harvesting) keessumattuu hongeen kan ka’e bakkawwan gammoojii hanqina roobaa…
Maddi humna eelektiriikii Gannaallee-Daawwaa ji’oota saddeetii oliif tajaajila kennuu dhaabeera
Itoophiyaa kibba-bahaatti laga Daawwaa irratti kan ijaaramee fi Gurraandhala bara 2012 eebbifamuun humna maddisiisuu kan jalqabe maddi humna eleektiriikii Gannaallee-Daawwaa (Genale Dawa III Hydropower Dam) tajaajila kennuu erga dhaabee ji’oota saddeetii ol akka ta’e eerameera. Namni humna eleektiriikii Itoophiyaa keessan…
Naannoo Amaaraa aanaalee afur keessatti dhibeen gifiraa mul’ateera
Naannoo Amaaraa aanaalee afur keessatti dhibeen gifiraa mul’achuu instiitiyuutiin fayyaa hawaasaa naannichaa beeksise. Aanaalee naannichaa Jaabii Xahinaan, Machakkal, Baasoo Liibanii fi Minjaar jedhaman keessatti weerarri dhukkuba gifiraa uumamuu instiitiyuutiin fayyaa hawaasaa naannichaa Addis Maaledaatti ibseera. Hoogganaan sab-quunnamtii instiitiyuutichaa Fiqire Maariyam…
Hidhattoonni Gumuzii fi ABO-Shaneen qabeenya saaman qooddchuu irratti wal-loluun isaanii ibsame
Naannoo Biiniishaangul-Gumuz godina Matakkal aanaalee Dibaaxee fi Bulan keessa kan socho’an hidhattoonni ABO fi Gumuz qabeenya saaman qooddachuuf waliigaltee irra waan hinga’iniif michummaa isaanii duraa irra gara lola hammaataatti ce’uu isaanii madden amanamoon bakkichatti argaman Addis Maaledaatti ibsan. Maqaan isaanii…
Godina Oomoo kibbaa qonnaan bultoonni aanaa Salaamaagoo beenyaan lafaa utuu nuuf hinkaffalamin waggoota 10 guuteera jedhan
Naannoo saboota, sab-lammootaa fi uummattoota kibbaa godina Oomoo kibbaa aanaa Salaamaagootti qonnaan bultoonni hawaasa Diimee 50 ol ta’an lafti isaanii hojii daandiitiif jedhamee waggoota 10 dura fudhatame beenyaan isaa hanga ammaatti akka hinkaffalaminiif Addis Maaledaatti ibsan. Bulchiinsi godinaa fi aanaa…
Ji’oota sagalitti namoonni 104 balaa tasaa fi abiddaan du’uun isaanii ibsame
Qabeenyi birrii biliyoona 100 fi biliyoona 61tti herregamu barbadaa’eera Ji’oota saglan darbanitti magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti namoonni 104 balaa tasaa fi abiddaan dud’uu isaanii koomishiiniin hooggansa balaa fi abiddaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Addis Maaledaatti beeksise. Bara bajataa 2014 ji’oota…
Naannoo Amaaraatti sababa waraanaatiin daa’imman kuma jahaa fi 305 maatii isaanii dhabaniiru jedhame
Naannoo Affaaritti tajaajilli baankii hawaasaatti qormaata ta’eera Naannoo Amaaraa godinaalee sadiitti daa’imman kumni jahaa fi 305 maatii isaanii akka dhaban dhaabbanni Abbagaar uummataa too’annaa taasiseen mirkaneessuu isaa beeksise.dhaabbanni Abbaagaar Uummataa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Affaaritti lammiiwwan sababa waraanaatiin buqqa’aniif kan…
Ji’oota sagalitti oomishni qurxummii tooniin kuma66 argamuun ibsame
Bara bajataa kana ji’oota sagalitti oomishni qurxummii tooniin kuma 66 ol argachuun akka danda’ame ministeerri qonnaa beeksiseera. Ministeera qonnaatti daarikteerri daayirektoreetii misooma qabeenya qurxummii Huseen Abagaaz Addis Maaledaatti akka ibsanitti; haroowwan keessaa oomisha qurxummii toonii kuma 34; hidhaawwan keessaa toonii…
Imaltoonni daandiiwwan dhedheeraa taarifaan ol waan kaffalanuuf balaaleffataa jiru
Imaltoonni Finfinnee irraa gara godinaaleetti akkasumas magaalaa tokko irraa gara biraatti adeeman taarifaan ol waan kaffalaniif balaaleffataa jiraachuu isaanii Addis Maaledaatti ibsan. Kanaanis qaamoleen geejjiba kennan yeroo gara yerootti seeraan ala kaffalchiisaa akka jiranuu fi too’ataan waan hinjirreef hawaasa mufachiisaa…
Dhaabbanni dhiyeessaa galteewwan induustirii sababa hanqina sharafa alaatiin galteewwan dhiyeessuu hindandeenye jedhe
Dhaabbanni dhiyeessaa galteewwan induustirii galteew-wan oomishaa biyyoota alaatii galan sababa hanqina shara-fa alaatiin dhiyeessuu hindan-deenye jechuun Addis Maale-daatti ibse. Dhaabbatichi galteewwan ind-uustiriiwwan oomishtoota adda addaatiif ta’an dhiyeessaa akka ture ibsuun; yeroo ammaa garuu hanqina sharafa alaatiin kan ka’e galteewwan hedduu…
Dallaan Jogol balaan akka itti aggaamame biiroon aadaa, haftee fi tuurizimii naannoo Hararii ibse
Naannoo Harariitti kan arga-mu dallaan Jogolii fi naannawaa isaatti manneen hambaadhaan galmaa’an irra balaan aggaama-muu biiroon aadaa, haftee fi tu-urizimii naannoo Hararii Addis Maaledaatti beeksiseera. Dhaabbata saayinsii, bar-nootaa fi aadaa adunyaa UNE-SCOtti hambaa adunyaa ta’uun kan galmaa’ee fi umurii waggaa…
Bulchiinsi looterii biyyaalessaa looterii ergaa gabaabaa jalqabuuf
• Itiyoo telekoom wajjin waldhabdeen qooddannaa bu’aa irratti ture furameera Bulchiinsi looterii biyyaalessaa barri bajataa kun utuu hinxumuramin tajaajila gurgurtaa looterii ergaa gabaabaa akka jalqabu Addis Maaledaatti beeksise. Bulchiinsi looterii biyyaalessaa bara bajataa 2013tti ergaa gabaabaadhaan (SMS) gurgurtaa looterii raawwachuuf…
Oomisha foonii fi aannanii ji’oota saddeet darbanitti gabaa alaatti dhiyaate irraa galiin birrii biliyoona 3.9 ol argame
Ji’oota saddeettan bara bajataa kanatti oomisha foonii fi aannanii gabaa biyya alaatiif dhiyaate irraa galiin birrii biliyoona 3.9 ol argachuu danda’uu instiitiyuutiin misooma induustirii foonii fi aannanii Itoophiyaa Addis Maaledaatti ibse. Kanaanis oomisha toonii kuma 16 fi 65 ol gabaa…
Buraayyuutti abbootiin warraa ganda Fiiliidooroo 200 ol manni keenya hojjettoota gandaa mattaa fudhatanuun nu jalaa diigamuufi jedhan
Naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu jalatti ganda Filiidooroo (Malkaa Gafarsaa) keessa kan jiraatan abbootiin warraa 200 ol manni keenya waggoota 13 ol keessa jiraanne hojjettoota gandaa mattaa fudhatanuun nu jalaa diigamuufi jechuun komii isaanii Addis Maaledaatti ibsan. Jiraattonni walqabsiisuunis mootummaan…
Paarkii biyyaalessaa Qaaftaa Shiraaroo keessaa arboonni 300 gara Ertiraatti godaanuun isaanii ibsame
Walqaayit Xagadee Seetiit Humaraatti arboonni paarkii biyyaalessaa Qaaftaa Shiraaroo keessa turan dhibbi sadii ol gara Ertiraatti godaanuu isaanii paarkichi Addis Maaledaatti beeksise. Bineensonni gosa adda addaa paarkicha keessa jiraataa turan akka godaananii fi keessumattuu arboonni faayidaa gabaatiif jecha adamoo seeraan…
Total views : 8946353